122s &#39;रोबर्ट फोर्स्टरलाई के ब्रेकिंगले खराब मतलब&#39; BTS | एल क्यामिनो images and subtitles
- हे, चलो ... - सबै ठीक छ, हामी रोलिंग गर्दै छन् EPK मा। -रोलिंग! Forster: तिनीहरूले तपाईंलाई बोलाउछन् र भन्छन्, भिन्स गिलिगन तपाईंलाई अर्को परियोजनामा ​​राख्न चाहन्छ। र सबैले "उत्कृष्ट" भन्छन्। यो राम्रो उत्पादन हो। जे होस्, यदि तपाईं आफ्नो कर्बीको साथ प्रेम गर्नुहुन्छ भने, म शर्त दिन्छु मँ यो तपाईको लागि फेरि काम गरीदिन्छु। मानिसहरू प्रायः मकहाँ आउँदछन् र भन्नुहोस्, "खराब ब्रेकि Bad।" र म केवल एउटा भागमा थिए। यो मेरो क्यारियर मा एक भारी कुरा भएको छ। मसँग अन्य केहि राम्रा चीजहरू पनि छन्, तर "ब्रेकि Bad नराम्रो" एक महान चीज हो। हूवर उत्पादनहरू, तिनीहरू ठीक त्यहाँ छन् तिम्रो पछाडि भित्तामा। हेर, मलाई याद छैन सहि, जस्तै, पासवर्ड, सबै ठीक, तर यो एक खाली चीज थियो। यो हामीले गरिरहेको एउटा अत्यन्तै रोमाञ्चक परियोजना हो। आरोन यस उत्पादनको ठूलो स्टार हो, र म खुशी छु कि उसले आफ्नै कथा पाइरहेको छ। म अभिनेताहरूलाई सम्झाउँछु जो केवल शब्दहरूको बारेमा सोच्छन, यो होइन, यो व्यवहार र समयको बारेमा हो। यो ... पहिले owedणी छ तपाइँ आशा गर्नुहुन्छ कि अर्को टेपमा तपाइँ समावेश गर्नुहुन्छ सबै राम्रो छ जुन तपाईंले पहिले नै गर्नुभयो केहि नयाँ छ जुन तपाईंसँग सोधिनेछ। थोरै भाग्य संग, तपाईं चाँडै आफैलाई पाउनुहुनेछ ... तपाईं बुझ्नुहुन्न। ... यहाँबाट धेरै माईलहरू। Godspeed तपाईंलाई। तपाईं के गर्न को लागी सामग्री वितरित छ जसरी तपाईले यो लेखिएको देख्नु भयो, र वितरण पनि गर्नुभयो केहि मूल्यवान हुन सक्छ चित्रमा त्यो शट राख्दै। जेसी: <i>एउटा सम्झौता हो?</i> <i>तपाईंको शब्द तपाईंको बन्धन हो?</i> [इनहेल्स] यो छ। यो राम्रो दिन भएको छ। ♪♪
&#39;रोबर्ट फोर्स्टरलाई के ब्रेकिंगले खराब मतलब&#39; BTS | एल क्यामिनो
< start="0.466" dur="1.635"> - हे, चलो ... - सबै ठीक छ, हामी रोलिंग गर्दै छन् >
< start="2.101" dur="2.036"> EPK मा। -रोलिंग! >
< start="4.137" dur="2.302"> Forster: तिनीहरूले तपाईंलाई बोलाउछन् र भन्छन्, >
< start="6.439" dur="4.037"> भिन्स गिलिगन तपाईंलाई अर्को परियोजनामा ​​राख्न चाहन्छ। >
< start="10.476" dur="3.537"> र सबैले "उत्कृष्ट" भन्छन्। >
< start="14.013" dur="1.635"> यो राम्रो उत्पादन हो। >
< start="15.648" dur="2.703"> जे होस्, यदि तपाईं आफ्नो कर्बीको साथ प्रेम गर्नुहुन्छ भने, >
< start="18.351" dur="2.835"> म शर्त दिन्छु मँ यो तपाईको लागि फेरि काम गरीदिन्छु। >
< start="21.186" dur="2.003"> मानिसहरू प्रायः मकहाँ आउँदछन् >
< start="23.189" dur="2.703"> र भन्नुहोस्, "खराब ब्रेकि Bad।" >
< start="25.892" dur="1.969"> र म केवल एउटा भागमा थिए। >
< start="27.861" dur="3.836"> यो मेरो क्यारियर मा एक भारी कुरा भएको छ। >
< start="31.697" dur="1.736"> मसँग अन्य केहि राम्रा चीजहरू पनि छन्, >
< start="33.433" dur="2.769"> तर "ब्रेकि Bad नराम्रो" एक महान चीज हो। >
< start="36.202" dur="1.936"> हूवर उत्पादनहरू, तिनीहरू ठीक त्यहाँ छन् >
< start="38.138" dur="1.901"> तिम्रो पछाडि भित्तामा। >
< start="38.138" dur="1.901"> हेर, मलाई याद छैन >
< start="40.039" dur="2.135"> सहि, जस्तै, पासवर्ड, सबै ठीक, >
< start="42.174" dur="1.502"> तर यो एक खाली चीज थियो। >
< start="43.676" dur="3.204"> यो हामीले गरिरहेको एउटा अत्यन्तै रोमाञ्चक परियोजना हो। >
< start="46.88" dur="3.269"> आरोन यस उत्पादनको ठूलो स्टार हो, >
< start="50.149" dur="3.771"> र म खुशी छु कि उसले आफ्नै कथा पाइरहेको छ। >
< start="53.92" dur="2.702"> म अभिनेताहरूलाई सम्झाउँछु जो केवल शब्दहरूको बारेमा सोच्छन, >
< start="56.622" dur="3.537"> यो होइन, यो व्यवहार र समयको बारेमा हो। >
< start="60.159" dur="3.237"> यो ... >
< start="63.396" dur="2.169"> पहिले owedणी छ >
< start="65.565" dur="2.97"> तपाइँ आशा गर्नुहुन्छ कि अर्को टेपमा तपाइँ समावेश गर्नुहुन्छ >
< start="68.535" dur="2.201"> सबै राम्रो छ जुन तपाईंले पहिले नै गर्नुभयो >
< start="70.736" dur="2.936"> केहि नयाँ छ जुन तपाईंसँग सोधिनेछ। >
< start="73.672" dur="3.605"> थोरै भाग्य संग, तपाईं चाँडै आफैलाई पाउनुहुनेछ ... >
< start="77.277" dur="2.335"> तपाईं बुझ्नुहुन्न। >
< start="77.277" dur="2.335"> ... यहाँबाट धेरै माईलहरू। >
< start="80.879" dur="1.67"> Godspeed तपाईंलाई। >
< start="82.549" dur="2.602"> तपाईं के गर्न को लागी सामग्री वितरित छ >
< start="85.151" dur="2.135"> जसरी तपाईले यो लेखिएको देख्नु भयो, र वितरण पनि गर्नुभयो >
< start="87.286" dur="1.868"> केहि मूल्यवान हुन सक्छ >
< start="89.154" dur="1.802"> चित्रमा त्यो शट राख्दै। >
< start="90.956" dur="1.369"> जेसी: एउटा सम्झौता हो? >
< start="92.325" dur="3.47">तपाईंको शब्द तपाईंको बन्धन हो? >
< start="95.795" dur="2.635"> [इनहेल्स] यो छ। >
< start="98.43" dur="1.602"> यो राम्रो दिन भएको छ। >